Mividy Fananana ao Rosia - Ahoana no Mividy Trano any Rosia - Ny mpisolovava rehetra ao Rosia! Ny lehibe indrindra mpisolovava vavahadin-tserasera.
Mividy Fananana ao Rosia - Ahoana no Mividy Trano any Rosia
Sale varotra foana ny maka toerana any amin'ny banky
Raha toa ka tsy hahazo mailaka ao anatin'ny minitra, jereo ny spam fampirimana na hifandray antsika ho amin'ny fanampianaNy lalàna tamin'ny nitondra ny fanokafana ny real estate ny fampiasam-bola vahiny.
Ny Tany Fehezan-dalàna ny taona dia mamela ny tsy miankina ny tompony ny tany sy ny fananana, na amin'ny mponina ao an-toerana sy vahiny.
Notary saram: Notary saram dia tsy voatery
Talohan'ny ny Tany Fehezan-dalàna, ny fananan-tany, tsy mitovy zo-ho-mampiasa (fananana). Io fanavahana ny eo amin'ny tompony sy ny zo-ho-mampiasa impeded ny malambolambo amin'ny fampandrosoana ny rosiana fananana tsena. Ny Tany ny fampidirana ny Fehezan-dalàna momba ny fananan-tany sy ny zo-ny-ampiasaina. Na izany aza, misy tranga izay ny lalàna dia tsy ampiharina ara-pivavahana sy ireo vahiny no afaka mbola tsy tafiditra ny tany Moskoa tsena.
Satria nisafidy ny trano, ny mpividy, ary koa ny mpivarotra takiana mba hanolotra antontan-taratasy ilaina ho an'ny formalizing ny fivarotana ny raharaham-barotra toy ny pasipaoro ny mpandray anjara rehetra, trano anaram-boninahitra antontan-taratasy, an-tanàn-dehibe Fisoratana anarana amin'ny Biraon'ny Zo amin'ny Real Estate fanambarana mikasika ny tsy fisian ny famerana ny fananana ampiasaina, ny tany drafitra, mpitsabo aretin-tsaina sy ny neurology toerana sy ny andinin-tsoratra masina an-tsoratra ho an'ny mpandray anjara rehetra.
Ny mpividy sy ny mpivarotra avy eo hampihatra ny fifanarahana mialoha, izay mamaritra ny toe-javatra rehetra ho avy fifanarahana, ary manoritra ny lisitry ny antontan-taratasy ilaina mba omena ny mpivarotra. Ny mpividy mipetraka feno hividy vola vola amin'ny petra-bola azo antoka boaty eo amin'ny toe-javatra izay ny banky dia hanafaka ny vola ho an'ny mpivarotra afa-tsy eo amin ny fanolorana ny fonosana tanteraka ny voasoratra ara-panjakana ny antontan-taratasy eo ambany ny mpividy ny anarany.
Tariby famindrana dia heverina riskier raha ampitahaina amin'ny vola fividianana satria escrow kaonty dia tsy efa tafapetraka tsara ao Rosia.
Araka ny fandoavam-bola, na antoko miroso amin ny famantarana ny fivarotana-fividianana fifanarahana manoloana ny realtor na ny notary. Ny fifanarahana vita sonia no nandefa ho an'ny fanjakana ny fisoratana anarana, araka izay tena famindrana ny fananan-tsara atao. Ny Fanekena Hanao zavatra tokony ho faty amin'ny roa tonta tamin'ny ny daty ny famindrana ny fananana, manamarina fa ny fananana no efa nafindra tany amin'ny mpividy iray azo ekena ny toe-javatra. Ny tapaka teny ny fisoratana anarana dia manodidina ny andro. Misy eo ho eo amin'ny US$ saran'ny raha manakarama olona iray mba hametraka ny antontan-taratasy fisoratana anarana. Ny diany tany amin'ny raharaham-barotra ny fandaniana ahitana ny lany rehetra mividy, ary avy eo dia famerenana indray ny fivarotana ny fananana - ny mpisolovava' saram, notaries' saram, fisoratana anarana saram, ny hetra, ny mpiasa' saram, sns. Real Estate Agent ny Saran'ny: T izy mpandraharaha ny vaomiera, ny karama avy amin'ny fandraisana mpiasa avokoa ny antoko, dia manodidina ny ny ny fividianana vidin'ny. Mpividy dia tena voalaza manakarama ny mpandraharaha noho ny fahasarotan'ny fifanarahana sy ny dingana mividy. Mpandraharaha ny saran'ny dia matetika manavaka ny fananana fikarohana, ny fananana sy ny zo hampiasa ny maso, ny fanakatonana fandaminana sy ny fanaraha-maso ny farany ny famindrana fananana.
Na izany aza, dia matetika soso-kevitra satria dia mitovy buying anaram-boninahitra fiantohana.
Notary sarany isan-karazany avy amin'ny. ho an'ny fananana lafo vidy mba. ho an'ny kely ireo. Fisoratana anarana saram: ny Fivarotana-fividianana fifanarahana dia tsy maintsy voasoratra ara-panjakana amin'ny Fanjakana Tsoratry ny Fananana ny Zo sy ny Efaha amin'ny isam. Mahazatra ny fisoratana anarana maka ny iray volana sy ny vola lany RUB, expedited fisoratana anarana dia azo RUB, ary maka ihany ny herinandro.
Ny saran'ny dia aloa isaky ny teny, ny raharaham-barotra mety mila maromaro ampy).
Raha toa ka ny fananana novidina dia trano amin'ny tany, misaraka saran'ny dia karama ho an'ny ny fisoratana anarana ny tany. Fisoratana anarana saram dia ahitana ihany koa ny taratasy fanamarinana sy ny extracts. TVA: Sanda hary Hetra ny dia takin'ny ny vidin'ny fividianana ny trano (faritry). Sale ny teti-dratsin'ny tany dia VAT-afa-miala. Mahazo isam-bolana nilaza ny fanadihadiana momba ny tontolo izao fananana tsena sy ny manokana, tany am-boalohany ny fidirana amin'ny fampiasam-bola fahafahana nanolotra marina ny inbox.
Mandray baovao manadihady sy ny fananany dia manolotra avy amin'izao tontolo izao ny toeram-ponenana tsena mivantana ny inbox.
AMERIKANA mpanampy ny mpampanoa lalàna rosiana ny Mpisolovava
Διαιτησία Δικηγόροι, δικηγορικά Γραφεία στη Ρωσία, για Κάθε Πόλη - ρώσος Δικηγόρος σε απευθείας Σύνδεση Διαβούλευση